Inqubomgomo Yobumfihlo - I-eGay Shop
I-Egay Shop Inqubomgomo Yobumfihlo
Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza ukuthi ulwazi lwakho lomuntu siqu luqoqwa kanjani, lusetshenziselwa futhi lukwabelwana ngenkathi uvakashela noma uthengwa kusuka ku-egay.shop ("iSayithi").
Ulwazi lomuntu siqu esikuqoqayo
Ukwengeza uma wenza ukuthenga noma uzama ukuthenga ngeSayithi, siqoqa ulwazi oluthile kuwe, kufaka phakathi igama lakho, ikheli lokukhokha, ikheli lokuthumela, ulwazi lokukhokha (kufaka phakathi izinombolo zamakhadi esikweletu), ikheli le-imeyili, nenombolo yocingo. Sibhekisela kulolu lwazi ngokuthi "I-oda lokwaziswa".
Sisebenzisa Kanjani Ulwazi Lwakho Lomuntu siqu?
Ukwabelana ngolwazi lwakho lomuntu siqu
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nemikhuba yethu yobumfihlo, uma unemibuzo, noma uma ungathanda ukwenza isikhalazo, sicela uxhumane nathi ngokuchofoza LAPHA.